गर्भावस्थाको यौन सम्पर्क कति सुरक्षित? « AayoMail
गर्भावस्थाको यौन सम्पर्क कति सुरक्षित?
काठमाडौं – महिला गर्भवती हुँदा धेरै कुराको ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। एक सानो गल्तीले पनि गर्भपात हुने जोखिम बढी हुन्छ। त्यसैले धेरै जोडीहरु गर्भावस्थामा यौन सम्बन्ध बनाउन डराउँछन्। अध्ययनहरुले के देखाएको छ भने अधिकांश जोडीहरु गर्भ बसेको तीन महिनापछि सम्बन्ध बनाउँदैनन्।
तर, मेडिकल साइन्सले भने यसलाई अस्वीकार गर्छ। चिकित्सकहरुले गर्भावस्थाका दौरानपनि सुरक्षित तरिकाले यौन सम्बन्ध बनाउन मिल्ने बताएका छन्। गर्भावस्थामा महिलामा शारीरिक र हार्मोनमा थुप्रै परिवर्तनहरु हुने गर्छन्। यस अवस्थामा महिलामा सेक्सको चाहना बढी हुन्छ। चिकित्सकले यस अवस्थामा हुने यौन सम्पर्कले शारीरिक आनन्दमात्र नदिएर भावनात्मक रुपमा पनि एकअर्कालाई नजिक राख्ने बताउँछन्।
चिकित्सकहरु भन्छन् कि गर्भावस्थाको कुनै पनि स्टेजमा यौन सम्पर्क खतरनाक हुँदैन। तर, बढी ब्लिडिङ भए तुरुन्त चिकित्सकको परामार्श लिनुपर्ने हुन्छ।
गर्भावस्थामा यौन सम्बन्ध बनाउँदा केही कुरामा भने अवश्य ख्याल राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो सरसफाइमा विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। यस्तै कन्डमको प्रयोग गर्न नबिर्सनुस्। यौन सम्पर्क राख्दा आसनमा विशेष ध्यान दिनुस्, पार्टनरलाई सहज हुने आसनमा मात्र सम्बन्ध बनाउनुस्। यसका लागि सबैभन्दा उत्तम आसन महिला पुरुषको माथि हुनु हो।
के हुँदा गर्नुहुँदैन यौन सम्पर्क
-ब्लिडिङ बढी हुँदा
-एमनायटिक फ्लुड लिक हुँदा, जसमा बच्चाको ज्यानमाथि खतरा हुनसक्छ।
-पहिले मिसक्यारिज भएको छ भने चिकित्सकको सल्लाहले मात्र यौन सम्बन्ध बनाउनुस्
-गर्भमा जुम्ल्याहा सन्तान छन् भने पनि यौन सम्पर्क नराख्नुस्
(यौन सम्बन्ध बनाउनुअघि चिकित्सकक सल्लाह एकपटक लिनु राम्रो)